जनवरी 27, 2020 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments	नेपाल र नेपालीको अवस्था, परिवर्तन
परिवर्तन कसरी सम्भव छ नेपाल र नेपालीको अवस्थाको ? आजको यो समयमा हामीले नेपाल र नेपालीको स्थितिको ’boutमा चिन्तन गरौं । हामीले एउटा पूरै पुस्तालाई असफल बनाई दिएका छौँ। हामी उनीहरूको आत्माले भन्न खोजेको कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनौं । आफ्नो तन्नेरी छोरालाई बिदा गरिरहेको आमा बुबाको आँखाबाट झरिरहेको आँसुलाई हेरौं ।
हामीले चाहेमा यो परिस्थितिलाई बदल्न सक्छौँ । आज हामीसँग यो परिस्थिति बदल्ने ऐतिहासिक अवसर पनि छ । हामीले यो अवसरको सदुपयोग गर्नैपर्छ ’cause यही हो सामाजिक न्याय र नैतिक दायित्व । नागरिकका रूपमा लिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि यही नै हो ।
हामी एउटा साझा लक्ष्य तय गरेर अघि बढौँ । त्यसका लागि उच्च स्तरका शैक्षिक र टेक्निकल शिक्षा देशमै सिर्जना गरौँ । त्यस्तो अवसर समतामूलक होस्, स्थानीय रूपले सान्दर्भिक होस् र सबैले ग्रहण गर्ने सक्ने खालको होस् । नेपाल प्रशस्त अवसर र सम्भावनाहरू भएको देश हो । हामीले आविष्कार, नवीनतम खोज र सकारात्मक परिवर्तन गराउने कामको सुरुवात गर्नैपर्छ । समुदायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यहरू गर्न युवाहरूलाई शिक्षित पार्नैपर्छ ।
यहाँ के आवश्यक छ त्यसतर्फ ध्यान दिन सके परिवर्तन सम्भव छ । शिक्षाको स्तरमा सुधार गर्नुपर्ने समय आएको छ । देशमा कस्तो शिक्षाको आवश्यक छ भन्नेतर्फ हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ । टेक्निकल शिक्षाप्रति हाम्रो झुकाब कम देखिएको छ । शिक्षा दिनु राम्रो हो दिएको शिक्षा प्रयोग हुनका लागि प्रयोगशालाको निर्माण हुन आवश्यक छ ।
परिवर्तन त्यसै हुने होइन हामीले चाहेमा परिवर्तन हुन्छ यसमा दुईमत छैन । हाम्रो ध्यान भड्की रहेको छ । देशले परिवर्तन मागेको छ तर हामीले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरिरहेका छौं । हिजो बन्द भएका उद्योगमा लगानी गरेर युवालाई नेपालमै जागीर दिन सक्ने थुप्रै अवसरहरू छन् तर हाम्रो ध्यान यता किन पुग्न सकेन ।
हामी निराश र चिन्तित नबनौँ । निराशा र चिन्ताले हामीलाई पिरोल्न थाले भने हामी आफैँलाई सोध्ने गरौँ – म अरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी प्रभाव पार्न सक्छु होला ? अनि त्यसैअनुसार कार्य गरौँ ’cause त्यस्तो प्रभावले नै जीवनमा ठूलो महत्व राख्छ ।
← पन्ध्र वर्षपछि विज्ञान प्रविधि परिषद् बैठक : समृद्धिको लक्ष्यमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई जोडिँदै
जातीय विभेद छ त तल्लो जातमै →
नोभेम्बर 24, 2017 साइन्स इन्फोटेक	0
मार्च 31, 2019 मार्च 31, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0
डिसेम्बर 17, 2018 साइन्स इन्फोटेक	3